ကား အသစ် ရောင်းရန် Carmudi Myanmar [Burma]
Chevrolet Daihatsu Ferrari Ford Honda Hyundai Jaguar Kia Land Rover Lexus Mitsubishi Nissan Peugeot Porsche Renault Suzuki Toyota
အထူးသီးသန့်(9)
A/C: Rear (15)
Jaguar XE 2017 ( USD 98500 )
MODELXE 2.0 I4P GTDi R - Sport, 8 - Speed Automatic Transmission, 2017 MYEXTERIOR COLOURRhodium SliverINTERIOR COLOURJet Light Oyster Stitch SeatsSTANDARD FEATURESR - Sport Fender Vent BlackRear ...
Jaguar XJ L 2017 ( USD 299900 )
MODELXJ Protfolio, 3.0L Petrol V6 SC, LWB 8 - Speed Automatic Transmission, 2017 MYEXTERIOR COLOURPolaris WhiteINTERIOR COLOURPerforated Quilted S/Grain Leather IP Contrast - Jet/London TanSTANDA...
2016 Chevrolet Colorado ( Regular Cab )
Lks 286 ညှိနှိုင်း
2016 Brand New Colorado Regular Cab ကို US $ 21000 ဖြ င့်ရောင်းချပေးနေပါသည်။ မြေမျက်နှုာပြင် မညီညာသော လမ်းခရီးများတွင် အကောင်းမွန်ဆုံးထိန်းချုပ်မောင်းနှင်နိုင်မည့်အပြင် အင်ဂျင်ရုန်းကန်မှုအားကောင်...
2017 Chevrolet Suburban (Brand New)
Lks 2,589 ညှိနှိုင်း
Brand New 2017 Chevrolet Suburban USD$ 179,000 ဖြင့်ကားအသစ်ကိုရောင်းချပေးနေပါသည်။ Chevrolet Suburban ကားသည် SUV အမျိူးအစားထဲတွင်ပါဝင်ပြီး Highway လမ်းများတွင် 9.8 km/L အထိ မောင်းနှင်နိုင်သောကြောင...
2017 Chevrolet Trailblazer ( Brand New )
Lks 986 ညှိနှိုင်း
Brand New 2017 Chevrolet Trailblazer ကားအသစ်ကို US$ 72000 ရောင်းချပေးနေပါသည်။ Trailblazer ကားသည် လူ7ယောက်အထိ သက်တောင့်သက်သာလိုက်ပါစီးနင်းနိုင်ပြီး Rear View Camera အပါအ၀င် Supplemental Restrain...
Jaguar XJ L 2017 ( USD 230000 )
MODELXJ Protfolio, 2.0L Petrol i4, LWB 8 - Speed Automatic Transmission, 2017 MYEXTERIOR COLOURNarvik BlackINTERIOR COLOURPerforated Quilted S/Grain Leather TrimIP Contrast - Lunar/CirrusSTANDARD...
Jaguar XF 2017 ( USD 179500 )
MODELXF R - Sport, 3.0L V6 S/C Petrol, RWD 8 - Speed Automatic Transmission, 2017 MYEXTERIOR COLOUREbony BlackINTERIOR COLOURJet and Red Zone, Jet/ Red Stitch SportSTANDARD FEATURESFront Park Aid...
Sportage (သိန်း 707)	$ 52000 x 1360 2.0 L Engine (Diesel) •	6 Speed Auto •	All Wheel Drive (AWD) •	5 Seaters •	Panoramic Sunroof •	Push Start Button •	6 Air Bags •	Auto Cruise Co...
Sorento	(သိန်း 816)	$ 60000 x 1360 2.2 L Engine (Diesel) •	6 Speed Auto •	All Wheel Drive (AWD) •	7 Seaters •	Panoramic Sunroof + Black High Glossy B-Pillar trim •	Push Start But...
Rio (သိန်း 346)	$ 25500 x 1360 1.4 L Engine (Gasoline) •	4 Speed Auto •	5 Seaters •	Sunroof •	Push Start Button •	6 Air Bags •	Full Automatic Air con(DFA) •	Auto Cruise Control ...
Kia Picanto (သိန်း 270)	$ 19900 x 1360 1.2 L Engine (Gasoline) •	4 Speed Auto •	5 Seaters •	Sunroof •	Push Start Button •	6 Air Bags •	Full Automatic Air con(DFA...
Kia Optima	(သိန်း 659)	$48500 x 1360 2.0 L Engine (Gasoline) •	6 Speed Auto •	2 Wheel (4x2) •	5 Seat •	Panoramic Sunroof + Black High Glossy B-Pillar trim •	Push Start Button •	7 Air Bags •	Auto...
Hyundai Motor Myanmar Showroom
Blue Hyundai Tucson 2017 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင...
Red Hyundai Accent မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်းလုံ...
Blue Hyundai i10 Grand မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစ...
Black Hyundai Genesis မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်းလ...
Black Hyundai Sonata မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Push Start. ဘေးကင်းလုံ...
Pearl white Hyundai Creta မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
ကားသစ်များကို မြန်မာပြည်မှာ အလွယ်တကူ ရရှိ နိုင်ပါပြီ။ သို့ပေမယ့် ရနိုင်မယ့် ကားအမှတ်တံဆိပ် နဲ့ အမျိုးအစားက အကန့်အသတ်ရှိနေပါသေးတယ်။ လက်ရှိ မြန်မာပြည်မှာ အလွယ်တကူ ၀ယ်နိုင်တဲ့ အသစ်ကားရဲ့  အမှတ်တံဆိပ်များကတော့ နစ်ဆန်း၊ မာစီဒီး၊ ဟွန်ဒိုင်း၊ ကီရာ၊ ဖော့ဒ်၊ ချဗလတ် တို့ ဖြစ်ပြီး တိုယိုတာ၊ ဘီအမ်ဒဗလျူ၊ လန်ရိုဗာ နဲ့ အခြားသော ကမ္ဘာကျော် အမှတ်တံဆိပ်များကိုလည်း မြန်မာပြည်မှာ မြင်တွေ့ ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကားအသစ်ကို ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများက များပြားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက ကတော့ အာမခံ ရရှိမှု၊ ဝန်ဆောင်ခ သက်သာမှုတို့အပြင် အခြားရနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ အများကြီးပါပဲ။ ဥပမာ ကားက အသုံးပြုနေတဲ့ တစ်နှစ်တာ ကာလအတွင်း အပျက်အစီးအချို့ ရှိရင် လက်ခ အခမဲ့ ပြင်ပေးတာတို့၊ အကယ်၍ စက်ရုံထုတ်ကတည်းက ပါလာတဲ့အမှားတွေဆိုရင် အခမဲ့ ပြန်လှဲပေးတာတို့ စတဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကားအသစ်ကို ဝယ်ခြင်းက ကုန်ကျစရိတ်များပေမယ့် ရတဲ့အခွင့်အရေးကလည်း မက်လောက်စရာပဲမို့ ကားအသစ်ဈေးကွက်ကလည်း ကျယ်ပြန့်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသစ်ထဲမှာ မြန်မာပြည် အရင်ဆုံး ရောက်တဲ့ ကားက တောင်ကိုရီးယား ကီရာရဲ့  အက်စ်ယူဗီကား ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မာစီဒီး၊ နစ်ဆန်း၊ဖော့ဒ် ချဗလန် တို့အပြင် အခြားသော ကားများလည်း ရောက်ပါတယ်း။ အမေရိကန်ကားများကတော့ ပစ်ကပ်စ်ကားများ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုယိုတာရဲ့  ဆလွန်းကားသစ်တွေကိုလည်း အချို့ အေးဂျင့်တွေက တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူ သွင်းပေးတာတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ကားတွေကိုတောင် ဘယ်နိုင်ငံကနေ ဝယ်ဝယ် မှာယူပေးတဲ့ ကုမ္မဏီတွေလည်း မြန်မာပြည်မှာ ရှိလာပါပြီ။
အသစ်ထဲမှာ လူကြိုက်များတဲ့ အသစ်ကတော့ မာစီဒီးကား သစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း အခြား ဥရောပ ကားတွေ မရောက်သေးလို့ပါ။ဘီအမ်ဒဗလျူ၊ ပေါ်ချေး၊ ဗို့စ်ဝက်ဂွန်တို့လို ကားအသစ်တွေ ဝင်လာရင်လည်း ရွေးချယ်စရာ ပိုလာအုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လန်းရိုဗာတို့လို ကားကလည်း နာမည်ကြီး အင်္ဂလန်ကားများ ဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်မှာ အင်မတန် ရေပန်းစားလျက် ရှိပါတယ်။ အသစ်ထဲမှာ ဆလွန်း၊ အက်စ်ယူဗီ တို့ အသွင်းများပြီး အခြားသော ကားများကိုလည်း သွင်းပါသေးတယ်။
Motors.com.mm မှာလည်း ရွေးချယ်လို့ရမယ့် ကားအသစ်များကိုလည်း တံဆိပ်နဲ့တကွ ဖော်ပြထားရှိပါတယ်။ သူ့ဆီမှာပါတဲ့ အရည်အသွေးများကိုလည်း လွယ်ကူရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားတာမို့ အသုံးပြုလို့ အဆင်ပြေ စေဖို့ မျော်လင့် ပါတယ်။